IValencia ithola izimoto ezintsha zikagesi ngemikhumbi yayo | Ukuvuselelwa Okuhlaza
IValencia ithola izimoto ezintsha zikagesi zemikhumbi yayo
IsiJalimane Portillo | | Ama-Autogas, Izimoto zikagesi
Izimoto zikagesi ziyisikhali esihle sokunciphisa ukungcola emadolobheni abhekele ezokuthutha. Ngakho-ke, Izimoto ezintsha zikagesi eziyi-18 zengezwe kule mikhumbi ezokuthutha eValencia.
Ngabe ufuna ukwazi izinzuzo zemoto kagesi nokuthi zikhule kanjani eminyakeni yamuva?
1 Izimoto ezintsha zikagesi eValencia
2 Ukusungula okuningi nokusimama
Izimoto ezintsha zikagesi eValencia
Ikhansela le-Integral Water Cycle, uVicent Sarrià, isikhulu esiphezulu seGlobal Omnium, uDionisio García Comín, kanye nomqondisi jikelele we-IVACE, iJulia Company, babambe iqhaza ekwethulweni kwezimoto ezintsha zemvelo ezizosetshenziswa yinkampani edolobheni lase I-Valencia.
Lawa amamodeli amasha we Izimoto zikagesi eziyi-100% ezinikeza ukusimama nokuhlonipha imvelo edingwa ngumkhathi wethu.
Kunabantu abaningi abafayo ngonyaka ukungcola komoya okuthatha emadolobheni ngenxa yezimoto zomgwaqo nezimboni. Inguquko yemoto kagesi iqala kancane, kepha ngokuqhubekayo selokhu ukufakwa kwayo emadolobheni kuyinkimbinkimbi.
Amamodeli afakiwe eValencia yiwo I-Renault Kangoo ZE ne-Zoe nokuzimela kwabo kungamakhilomitha angama-240 no-400, ngokulandelana.
Ukuze kusetshenziswe kahle futhi kube lula ukusetshenziswa kwalezi zimoto, kufakwe amaphuzu amashaja angama-26 enkabeni yeVara de Quart yizinkampani i-Emivasa neGlobal Omnium. Lokhu kukhombisa ukuthi izimoto zezimoto ezisebenza ngogesi zingakhuphuka kakhulu eminyakeni ezayo.
Kuyadingeka ukuthi sandise inani lezimoto zikagesi uma sifuna ukunciphisa ukungcola okungcolisayo. Impilo yabo bonke isezandleni zethu, yize kungumsebenzi onzima nofisa ukuvelela.
Ukuguquka kwesimo sezulu, njengoba sazi, kuyiqiniso elisithinta sonke kusuka emhlabeni kuya endaweni. Ngakho-ke, iGlobal Omnium ihlose ukufaka isandla ekuxazululeni lesi simo esingathinta endleleni yethu yokuphila nemithombo yamanzi.
UDionisio García ugcizelele okulandelayo:
"Sihlale sizibonakalise siyinkampani ebandakanyeka emphakathini futhi, bekungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, sizoqhubeka nokuphakamisa izixazululo ezinomthelela enhlalakahleni yabo nokusetshenziswa kwezimoto zemvelo ngenye yazo".
Ukuze kuncishiswe imiphumela yokungcola kanye nokuguquka kwesimo sezulu, ukutholwa kwalezi zimoto ezijikelezayo kuzonciphisa ukukhishwa kwe- ngaphezu kwamathani angama-30 e-CO2 emkhathini, ukuba ngelinye lamagesi afaka isandla kakhulu ekushiseni komhlaba.
Lesi sinqumo singenxa yeqhinga lezinkampani inhloso yalo ukushintsha kancane kancane izimoto zikadizili nophethiloli kufakwe ezinye ezisimeme ezinomthelela ekongweni kwemvelo.
Ukusungula okuningi nokusimama
IGlobal Omnium ifaka ubuchwepheshe obusha ohlotsheni lwezimoto zemvelo ezinganciphisi ukusebenza kepha okunomthelela ekulondolozweni kwemvelo emphakathini ozimele waseValencia.
Kuze kube manje, Kufakwe izimoto ezingama-33 zemvelo (13 LPG no-20 kagesi), kuhlelwa ukuthi kufakwe eminye engu-15 ngonyaka ozayo (4 LPG, 7 electric and 4 hybrids). Lesi sinyathelo sandisa ukusimama futhi siqinisekisa ikhwalithi yezemvelo yezizukulwane ezizayo, ngoba ukungcola komoya kuyancipha.
Kulolu hlobo lwentuthuko yezobuchwepheshe, iValencia bekulokhu kuyisizinda. Ukwamukelwa kwezimoto zikagesi eValencia kunezela empumelelweni kubuchwepheshe obutholakele eminyakeni yamuva. Lokhu kwenza iValencia idolobha elikhulu lokuqala elizibophezele ekusimamiseni isiminyaminya sezimoto.
Ucezu lolwazi olusekela le mpumelelo ukuqashelwa kombiko we-Innovation neDolobha, oshicilelwe yiCentre For An Urban Future (CUF) kanye neWagner Innovation Labs, we-NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, eNew York , lapho ukufundwa okukude kwamamitha smart okwenziwe yiGlobal Omnium, edolobheni laseValencia, kugqame njengenye yezinto ezintsha emhlabeni eziyi-15, ezenziwa eminyakeni yamuva.
Njengoba ukwazi ukubona, ukukhuphuka kwezimoto zikagesi kuya ngokusondela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ubuchwepheshe obusha » Izimoto zikagesi » IValencia ithola izimoto ezintsha zikagesi zemikhumbi yayo
I-United States neChina bangabaholi abaphelele kumandla omoya
I-Albacete yisifundazwe esikhiqiza amandla omoya amaningi eSpain nesesithathu ku-photovoltaic